အောင်ထွန်းဦး: အားရှိအောင် ကလေးကို စွပ်ပြုပ်လုပ်သောက်ကြတယ်တဲ့……
အားရှိအောင် ကလေးကို စွပ်ပြုပ်လုပ်သောက်ကြတယ်တဲ့……
တရုတ်မှာ လူသားကလေးငယ်ကို ကာမစွမ်းအားအတွက် စွပ်ပြုပ်အဖြစ် သုံးဆောင်နေကြသည်။
စွပ်ပြုပ်တစ်ပွဲရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ 4,000 ခန့်ရှိပါတယ်။
အဲဒီဆိုင်ရဲ့ တာဝန်ခံကို သတင်းထောက်တစ်ယောက်မှ မေးမြန်းရာမှာ ဒီစွပ်ပြုပ်ကို သူစမ်းသောက်ကြည့်ကြောင်း၊ တစ်ကယ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းနှင့် သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ စွပ်ပြုပ်ကို မကြာခဏသောက်သုံးလေ့ရှိကြောင်း ပြောကြားပါတယ်..။
ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ..၊ သူဟာ သတင်းထောက်ကို စားသောက်ဆိုင်ခေါ်လာခဲ့ပြီး သူတို့ ဒေသအခေါ် နံရိုးရံ ဟင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကလေး စွပ်ပြုပ်ကို ရနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ၊ သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ်လွယ်ထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဟာ မိန်းကလေးဖြစ်မှန်း သိတာနဲ့တစ်ပြိုက်နက် ကလေးကို ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်..၊ ကလေးက ခုမှ ၅ လပဲရှိပါသေးတယ်..။
သူတို့ဟာ မွေးခါနီးနဲ့ ပုံမှန်သေဆုံးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် တရုတ်ငွေ ၂၀၀၀ လောက်ရနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုဖျက်ချတဲ့ ကလေးတွေကို ရာဂဏာန်းမျှသာ ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်…
အဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ပိုက်ဆံပိုရချင်တာနဲ့..၊ ကလေးကိုမဖျက်ချပဲနဲ့ အထဲက သန္ဒေသားကို ဈေးပိုပေးဖို့ပြောပြီး ရောင်းချခဲ့ပါတယ်..။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဒါဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်လွန်းတဲ့ အလေ့အထကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးပွားလာတဲ့ လူဦးရေ ကြောင့် နောက်ပိုင်းချမှတ်ခဲ့တဲ့ တစ်မိသားစု ကလေးတစ်ယောက် စနစ်ကြောင့်လည်း ပါဝင်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေကို ပိုလိုချင်ကြတာကြောင့် ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုမှ မိန်းကလေး သန္ဒေသားတွေကို ရောင်းချကြတာကြောင့် ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်တွေ မြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 1:46 AM
ခေါင်းစဉ် ထူးဆန်းထွေလာများ, လူသားများ၏ ရက်စက်မှုများ
ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံ (၅) ပုံ
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် Premier Eleven Sports Journa...
ကလေးတွေကံကောင်းစေဖို့ ပေ ၃၀ မှပစ်ချစို့ ...
လန်ဒန်အိုလံပစ်ပွဲမှာ တရုတ်တို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့် ပြ...
Samsung ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာ Font နှင့် မြန်မာစာ K...
တစ်ချိန်တည်း ဆေးမှင်ကြောင်အပ်ပေါင်း ၃၂၀၀အစိုက်ခံပြ...
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး၊ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးခွေး...
တောင်ကြီးမြို့မှာ ၁၀ တန်းကျောင်းသားလေး အုပ်စုဖွဲ့ ...
ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်စေတဲ့.. ၅၅ ပေ၇ှည်လျားသော..မြွှေကြီး....
Andriod ဖုန်းများအတွက် မရှိမဖြစ် Gothere Myanmar S...
ခွေးတွေကို သတ်ပြီး ဒီလိုရောင်းချပါသတဲ့
မသန့်ရှင်းသော မျက်ကပ်မှန် ဆိုးကျိုး
သွေးတွေနဲ့ ငိုနေရတဲ့ မိန်းကလေး
သတင်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ မိမိဖုန်းပေါ်တွင် ...
Andriod ဖုန်းများအတွက် မိုဘိုင်းလမ်းညွှန်
သင့်ဖုန်းမှာ Themes လှလှလေးတွေ ဖြစ်ဖို့ Go-Launche...
မကြုံစဖူး ရေကြီးမှုကြုံနေရသော ကျွန်တော်တို့ လားရှိုး...
အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ ၀က်ကိုတောင် tatoo ထိုးပေးရတယ်လိ...
ခွေးကနေ လူသားလေး မွေးတာတဲ့...
Andriod ဖုန်းများကို computer မှ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန...
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ထုတ် Premier Eleven Sports Journa...
ကမ္ဘာ့ ထူးခြားအံ့ ဖွယ်မှတ်တမ်းသစ်များ
မျက်နှာ မရှိတဲ့ ကလေးမလေး
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်
မြွေ အကောင်လိုက်မွေးတာကို မမြင်ဖူးသူများအတွက်ပါ.
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ First Eleven Sports Journal အတွဲ...
Viber သုံးပြီး အခမဲ့ ဖုန်းပြောကြမယ်…
ယခုအပတ်ထုတ် Mobile Guide Journal
အင်ဒိုနီးရှားဆူနာမီမှ ပေါ်ထွက်လာသော ရေသူမ
Internet Network ကို 2G Network မှ 3G Network ကို ...
သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven News Journal
Wallpaper ကို လန်းလန်းလေး သုံးချင်သူများအတွက်
သရဲ၊ နာနာဘာဝများနှင့် ကခုန်ခြင်း - ၁
ယနေ့ထုတ် Premier Eleven Sports Journal အားရယူရန်
စပါးကြီးမြွေနှင့် မိချောင်းတို့ တိုက်ပွဲ ဓါတ်ပုံမျ...
ကမ္ဘာတစ်လွှား ထူးခြား သစ်ပင်များ
ဖုန်းဖြင့်တွဲပြီး PC နှင့် Laptop များပေါ်တွင် အင်တ...
Andriod ဖုန်းများအား Applications များထည့်သွင်းခြင...
ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဒီလိုလေး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြရတယ်တဲ့......
သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ထုတ် First Eleven Journal
"မြန်မာအလုပ်သမ တစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီး ၅ထပ်တိုက...
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ဘယ်သူပိုပြီး အိုမင်းမြန်သလ...
UNHCR ရုံးရှေ့  ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သတ်သည့် ဆန္ဒဖော်ထ...
အမှန်တွေ ... :)
မျောက်များကို နို့်တိုက်ပြီး မွေးမြူနေတဲ့ မျိုးနွယ...
Premier Eleven Sports Journal အား ရယူရန်.
မန္တလေး ဧရာဝတီတံတားပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး မျက်နှာခ...
ပထမဆုံး အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်းရိုက်နေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည...
Facebook မှ လူသား ဘာဘီလေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက...
Andriod ဖုန်းများကို Internet ချိတ်ဆက်နည်း
လူတူ ၀က်တူတဲ့... (တစ်ကယ့်အစစ်လား၊ ကွန်ပျူတာ effect...
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှ ကိုယ်ကိုယ့်ကို မီးရှို့ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်...